High Pure MAX.99.99% PBN Pyrolytic Iboron ephuculweyo ring yodongwe
PBN Ukwaleka Pyrolytic Iboron ephuculweyo yodongwe
1.Purity ukuya kwi 99,99%, umphezulu ashinyeneyo, umoya yobunzima
2.High amandla lobushushu
PBN yi ubunyulu eliphezulu (99.995%) zobugcisa yodongwe, mayifakwe kwi ezinokwakheka kuka-free emi (crucibles) kunye Ipeyinti kwi grafayithi usebenzisa i (zemithambo) Inkqubo Chemical nomphunga komhlaba. Crystal isakhiwo sale yodongwe ezingezo-zinetyhefu yenziwe ngohlobo lokuba ivelisa iqondo eliphezulu anisotropy thermal ezithandwa crystal ukukhula kunye nezinye izicelo.
I-Pyrolytic Boron Nitride (PBN) I-ceramidi iringi
1.Color Ivoney White ukuya kwi-Orenji-Brown, engenabungozi, engenantlonelo, ekulula ukuyiqhubela phambili.
2.Ukunyusa ukuya kwi-99.99%, indawo emdaka, ukuqina komoya.
3.ingaphezulu kobushushu obunamandla okukhulisa, ezingama-2200 ° f ufikelela kwixabiso eliphezulu.
4.UCacid, i-alkali, ityiwa yetyuwa, ubushushu obuphezulu, kunye nobuninzi besinyithi etyhutywe, i-semiconductor i-semiconductor ayinamkhulu, ayikokuphendula.
I-5 yokunganyangeki eyothusayo ye-thermal eyothusayo, ukuqhubela phambili kwengqondo, ukwenziwa kwenkunkuma ephantsi.
Ukumelana okuphezulu, amandla aphezulu kaDiecric, a Ilahleko encinci yediliya, kwaye ilahleko yemagnethi esezantsi, kwaye ene Ukungqinelana okuhle kweepropathi ze-microwave kunye ne-infrared.
7. Performance of a ngomatshini, thermal, umbane, ngoko akukho anisotropy ecacileyo.